Imwe runyerekupe inoona kuti iyo iPhone 7 ichave isina mvura | IPhone nhau
Imwe runyerekupe inoona kuti iyo iPhone 7 ichave isina mvura
Sezvo chirevo chichienda "Kana rwizi ruchirira, mvura inotakura". Ichi chinhu chinogona kushandiswa kune iyo inowanzo kuwanda runyerekupe izvo zvinotaura nezve a Mvura isina mvura asi, mune ino kesi uye zvine musoro, iyo iPhone yaisazotakura mvura, dai zvisiri iyo yaisazokuvadza iyo. Runyerekupe rwazvino runouya kwatiri kubva kuTaiwanese nharaunda DigiTimes, uyo anovimbisa kuti mutengesi weApple anonzi Catcher Technologies achave mumwe wevaya vanoona nezvekupa iyo iPhone 7 chassis mune nyowani inodzivirira mvura zvinhu.
Catcher Technologies yaizotarisira 30-35% yematambudziko eiyo iPhone 7 uye ndiyo yaizove mutengesi mukuru wechinhu ichi. Icho chokwadi chekuti ivo vanotaura «nyowani zvinhu zvinoumbwa»Zvinoita kuti tifunge kuti pamwe Apple haizoshandisa base simbi yekunze kweinotevera iPhone. Izvi zvinogona kuve zvakakosha kugadzirisa dhizaini yeiyo iPhone 6 / 6s nekuti inogona kubvumidza avo vanobva Cupertino bvisa mitsara kubva kumashure, mimwe mitsara iri kudiwa izvozvi kuitira kuti mudziyo usarasikirwe nekuvhara kwawo.
Iyi kanyanga chimwe chinhu icho DigiTimes chinotaura zvakare asi, zvine musoro, pasina kupa rumwe ruzivo. Chinhu chega chinotaurwa ndechekuti dzimba dzichagadzirwa mishonga mitsva kuviga maantena.
Iyo iPhone 6s uye iPhons 6s Plus yakatove neshanduko huru idzo dzakavapa kukurira kukuru kwemvura. Muchiitiko cheazvino maPhones, shanduko idzi dzave dzakavanzika, asi dzakaringana kuti dziite kuti dzipedze kwenguva refu dzakanyudzwa mubhaketi remvura, inova imwe yemiedzo yekurwisa iyo chero chinhu chitsva chinowanzoitirwa. Kuti iyo iPhone 7 isabatwe zviri pamutemo nemvura, Apple yaizofanirwa kuunza nyowani yekugadzirisa kuti isimbise maburi ayo ese nezviteshi izvo zvaizoibvumidza kuti iite IPX7 chitupa. Shanduko idzi dzinogona zvakare kupa iyo inotevera iPhone ine guruva kuramba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Imwe runyerekupe inoona kuti iyo iPhone 7 ichave isina mvura
Iyo iPhone 6c ichave nebhatiri rakawanda uye RAM pane iyo 5c [RUMORI]
Nei Steve Jobs asina kubhadhara mainjiniya ake zvakanyanya?